Amerika : Manomboka ialan'ny namany i Donald Trump
vendredi, 08 janvier 2021 14:12
Taorian'ny fanentanan'i Filoha am-perinasa Donald Trump ireo mpomba azy tsy hanaiky ny vokam-pifidianana ho filoham-pirenena amerikanina, ary nanentanany ny akana ny Capitole, foiben'ny fahefana amerikanina izay misy ny Kongresy, dia nirohitra niditra nanao amboletra, nandritra ny fivorian'ny Kongresy, ny solombavam-bahoaka sy ny senatera amerikanina, izay mivory manamarina ny vokam-pifidianana, ireo mpanohana an'i Donald Trump.
Navoaka aingana tao amin'ny efitra fivoriana ireo mpikambana ao amin'ny Kongresy, nisy ny famakiana fitaratra, fanimbana ireo birao sasany, fiakarana teny amin'ny toerana natokana ho an'ny filohan'ny andrim-panjakana, fanaovana zinona ny toerana.
Nisy ny lakrimozenina nirefotra, ary nisy ny maty vokatry ny tifitra.
Tsy nanaiky ny anakanana ny fanamarinana ny fifidianana anefa ny filoha lefitra amerikanina Mike Pence, izay samy Repoblikanina toa an'i Donald Trump ihany koa, na dia efa nentaniny tsy hanao izany fombafomba fanamarinana izany. Maro koa ireo senatera tsy nanaiky izao toetra nasehon'i Donald Trump izao.
Hita taratra fa navelan'ireo mpiambina ny toerana hiditra mora ireto mpananika lapa ireto, ka nametram-panontaniana ny maro hoe, miray petsapetsa amin'ny filoha ve, sa nahita ny amaroan'ireto olona nirohitra an-keriny ka naleo tsy nanohitra tsy ahamaro ny simba sy ny faty olona.
Raha nisy ny antso tokony nataon'ny Filoha am-perinasa ny Tafika mba hanampy tosika ireto mpiambina lapa ireto dia tsy nataony izany, ka ny Filoha lefitra Mike Pence no naka ny fepetra nampiantso ny Tafika, izay vao voafehy ny korontana, ary niverina nivory ny Kongresy.
Lany ho Filoham-pirenena amerikanina ary i Joe Biden, antoko demokraty, taorian'ny fanamarinana farany nataon'ny Kongresy. Amin'ny alarobia 20 janoary izao izy no manao ny fianianany izay araha-davitra noho ny hamehana ara-pahasalamana.
Ny filoha Donald Trump kosa, rehefa nametram-pialana ihany koa ireo minisitra roa, ary notapahin'ny tompon'ny orinasa Facebook, Mark Zuckerberg, ny compte ny, ary tapaka ihany koa ny Twitter, izay nambaran'izy ireo fa tsy mendrika ny fanentanana hikomy hianika lapa nataon'i Donald Trump amin'ny fitaovan-tserasera eo amin'izy ireo, dia nindrana compte n'olon-kafa nilazany fa hiroso am-pilaminana amin'ny famindram-pahefana izy, na dia tsy niaiky ny fahereseny aza, ary nanao antso amin'ireo mpomba azy mba ho tony.
Ireo mpiray antoko amin'i Donald Trump mihitsy no misy ny tezitra ka mikasa ny ampihantona azy amin'ny maha filoham-pirenena azy, izay tsy tapitra raha tsy ny 20 janoary, nefa fohy izay fotoana izay ka tsy ahavita an'izay fombafomba fampiatoana izay. Misy ihany koa ny mikasa ny hitory an'i Donald Trump, nefa amin'ny maha filoham-pirenena azy ankehitriny dia voaharo mahakasika izany izy.
Ankehitriny dia azo atao hoe mitoka-monina ihany ny filoha Donald Trump, na dia mbola maro kosa ireo Amerikanina manohana azy.